६ त्यसोभए, हामी के भनौं? असीम अनुग्रह झन्‌ बढ्दै जाओस् भनेर के हामी पाप गरिरहौं? २ त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! हामी पापमा मरिसकेका छौं भन्ने देखेपछि हामी कसरी पापैमा बाँचिरहन सक्छौं र? ३ अथवा के तिमीहरूलाई थाह छैन, हामी सबै जना जसले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा* गऱ्यौं, उहाँको मृत्युमा पनि बप्तिस्मा गऱ्यौं? ४ त्यसकारण, उहाँको मृत्युमा बप्तिस्मा गरेर हामी उहाँसँगै गाडियौं, ताकि जसरी बुबाको गौरवशाली शक्तिद्वारा ख्रीष्ट मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि नयाँ जीवन बिताऔं। ५ किनकि यदि हामी उहाँजस्तै मरेर उहाँसित एक भएका छौं भने उहाँजस्तै पुनर्जीवित भएर उहाँसित एक पनि हुनेछौं। ६ किनकि हामीलाई थाह छ, हाम्रो पुरानो व्यक्तित्व उहाँसितै खम्बामा टाँगिएको छ, ताकि हाम्रो पापी शरीरले हामीमाथि प्रभुत्व नजमाओस् र अब उप्रान्त हामी पापको दास भइरहन नपरोस्। ७ किनकि जो मर्छ, ऊ आफ्नो पापबाट मुक्त हुन्छ। ८ यसबाहेक, हामी ख्रीष्टसित मरेका छौं भने उहाँसितै बाँच्ने पनि छौं भनी हामी विश्वास गर्छौं। ९ किनकि हामीलाई थाह छ, ख्रीष्ट अहिले मृत्युबाट ब्यूँतिसकेको हुनाले उहाँ फेरि मर्नुहुन्न; उहाँमाथि अब मृत्युको प्रभुत्व छैन। १० किनकि उहाँ जुन मरण मर्नुभयो, पापको लागि एकै चोटि सदाको लागि मर्नुभयो तर उहाँ जुन जीवन जिउनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको लागि जिउनुहुन्छ। ११ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि पापको लागि आफू मरिसकेको छु तर ख्रीष्ट येशूमार्फत परमेश्वरको लागि जीवित छु भनी सम्झ। १२ त्यसैले मरणशील शरीरको इच्छाको वशमा नपर्न तिमीहरू त्यसमाथि पापलाई राजाले झैं राज गरिरहन नदेओ, १३ न त तिमीहरू आफ्ना अङ्गहरूलाई खराबी गर्ने हतियारको रूपमा पापलाई सुम्प। तर मृत्युबाट ब्यूँतेका मानिसहरूको नाताले तिमीहरू आफूलाई परमेश्वरलाई सुम्प अनि आफ्ना अङ्गहरूलाई पनि उहाँको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने हतियारको रूपमा परमेश्वरलाई सुम्प। १४ तिमीहरू पापलाई आफूमाथि प्रभुत्व जमाउन नदेओ, किनकि तिमीहरूलाई थाह छ, तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर असीम अनुग्रहको अधीनमा छौ। १५ त्यसोभए हामी के भनौं? हामी व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर असीम अनुग्रहको अधीनमा छौं भन्दैमा के हामी पाप गरौं? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! १६ के तिमीहरूलाई थाह छैन, कसैको आज्ञा मान्न तिमीहरूले आफूलाई उसको दासको रूपमा सुम्पिरहन्छौ भने तिमीहरू उसैको दास हुन्छौ किनभने तिमीहरू उसको आज्ञा मान्छौ? त्यसैगरि तिमीहरू कि त मृत्युको लागि पापको दास वा असल कामको लागि आज्ञाकारिताको दास बन्छौ। १७ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, किनभने तिमीहरू पापका दास थियौ तर तिमीहरू त्यस शिक्षाप्रति मनैदेखि आज्ञाकारी भयौ, जुन तिमीहरूलाई सुम्पिइएको थियो। १८ हो, तिमीहरूलाई पापबाट स्वतन्त्र गरिएकोले तिमीहरू परमेश्वरको स्तरबमोजिमको असल कामको दास बन्यौ। १९ तिमीहरूको पापी शरीरको कमजोरीलाई विचार गर्दै एक जना मानिसको दृष्टिकोणले म बोल्दैछु: जसरी तिमीहरूले कुकर्मका लागि आफ्ना अङ्गहरूलाई दासको रूपमा अशुद्धता र कुकर्मलाई सुम्प्यौ, त्यसरी नै अब पवित्रताका लागि आफ्ना अङ्गहरूलाई दासको रूपमा असल कामलाई सुम्प। २० किनकि तिमीहरू पापको दास छँदा असल कामको तिमीहरूमाथि प्रभुत्व थिएन। २१ त्यसोभए, तिमीहरूले त्यतिबेला कस्ता फल फलाउने गर्थ्यौ? त्यस्ता कुराहरू, जसदेखि तिमीहरूलाई अहिले सरम लाग्छ। किनकि ती कुराहरूको अन्तिम परिणाम मृत्यु हो। २२ तथापि, अहिले तिमीहरू पापबाट स्वतन्त्र भएर परमेश्वरका दास भइसकेकोले तिमीहरूले त्यसको फलको रूपमा पवित्र जीवन पाइरहेका छौ र अन्तमा अनन्त जीवन पाउनेछौ। २३ किनकि पापले तिर्ने ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरले दिनुहुने वरदान हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमार्फत अनन्त जीवन हो।
^ रोमी ६:३ * मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।